किमोनो र युटाटा | Experience Japan
› ब्लग Nepali › किमोनो र युटाटा
किमोनो र युटाटा
किमोनो र युटाटा किमोनो एक परम्परागत जापानी कपडा हुन्। Yukata एक प्रकार का किमोन हो। किमोनो जाडोमा पहिएको छ। ग्रीष्ममा युटाटा पहिएको छ।
किमोनो र योकुटा बीचको भिन्नता एक हो) मौसमहरू (किमोनो: सर्दिया, युकुटा: गर्मी), ख) आस्तीन (किमोनो = लामो आस्तीन, युकाता: छोटो आस्तीन), ग) कपडाको मोटाई (किमोनो: मोटो कपडा, युटाटा: पतली कपडा)। किमोनो र योकुटा बीचका अन्य भिन्नताहरू छन्। कृपया तल तलको तालिका पढ्नुहोस्।
किमोनो र योकुटाबीच मतभेद किमोनो युटाटा
कपडा कस्तो छ? मोटो पतला
मानिसहरूले कहिले लुगा लगाउँछन्? जाडो र हिउँद
वसंत ऋतु र गर्मी
कुन अवसरमा? विवाह समारोह, चिया समारोह, आआफ्नो उमेरको समारोह
फायरवर्क उत्सव, गर्मीको पर्व
आकृति कसरी छ? सरल डिजाइन, पास्ता रंग, साश माथिको धेरै सानो डिजाइन
धेरै रंगीन, धेरै रंगहरू
यसलाई कता लामो समय लाग्न सक्छ? 20 मिनेट सम्म 2-3 मिनेट
के यो बनाएको छ ? सिल्क कपास
यो कति खर्च गर्छ? $ 500 वा बढी $ 50 वा बढी
आस्तीनको लम्बाइ के हो? लामो छोटो
फरक प्रकार के हो ? Uchikake, फुरिसोड, हकमा, Homongi, Tomesode, हिरोमाकू –
सबैजना यो गर्न सक्छन्? केवल एकल महिलाले फुरिसोड लिन सक्छ –
त्यहाँ त्यहाँ तह तहहरू छन् ? हो (जानकारी) होइन
स्यान्डल र सहायक उपकरणहरू कसरी छन्? सुरुचिपूर्ण (जुरी) आरामदायक (geta)
Kimono को परिभाषा मा Maikooya मा किमोनो र योकान्त अनुभवको बारे थप जान्नुहोस् :
किमोनो एक पटक वस्त्र लागि जापानी शब्द थियो तर आजकल प्राचीन जापान देखि परम्परागत वस्त्र बुझाउँछ। महिलाहरु लगाउने कि लामो राज बस्त्र सबैभन्दा जापानी वस्त्र को पहिचान हो, तर शब्द किमोनो पनि स्टाइलिश राज बस्त्र र सुरुवाल मानिसहरू द्वारा साथै थकित संकेत गर्न प्रयोग गरिएको छ।
Kimonos जापानी इतिहास (794-1192 ई) को Heian अवधिमा स्थापित थिए। यस राज बस्त्र थप तहहरू प्रयोग थिए झन् जटिल भयो। धेरै किमोनो डिजाइन पनि फरक मौसम, बिदा वा तपाईंलाई belonged समाज को कक्षा प्रतिनिधित्व गर्न विकास भए। महिलाहरु द्वारा पहना रेशम kimonos थप चिन्न गर्दै छन्, तिनीहरूले पनि यस्तो कपास, लिनन वा साटन अन्य सामाग्री बाहिर गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक उन्नाइसौँ शताब्दीमा जापानी सरकार थप पश्चिमी वस्त्र र बानी अपनाउने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिए। फलस्वरूप, kimonos अब साधारण थप औपचारिक वस्त्र रूपमा राखिन्छ र विशेष अवसरमा अक्सर थकित छन्।
किमोनो शब्द संग्रह:
Datejime: बेल्ट को OBI बेल्ट तल बस्छन र सिद्ध किमोनो छाँयामासुनिश्चित गर्दछ
Getaकि:एक एडीबिना परम्परागत जापानी जूता
OBI फीता संग दैनिक kimonosमेल खाने Hanhaba
Jubanछ:सेतो कपास पर्ची को किमोनोतल
कोशी himoमिलेको:कपास ठाउँमा किमोनो धारण कि
OBIबेल्ट:सजावटी रेशम फीता
Zori:एक एडीछ कि परम्परागत जापानी
सम्झना:एक लेडी गरेको किमोनो मा राख्दै प्रक्रिया
सबै भन्दा kimonos राम्ररी धारण गर्न अर्को सहायक चाहिन्छ भनेर जूता।
1 एक कागज मा डाल juban भनिन्छ। यो एक स्नानवस्त्र जस्तै फिट र छेउमा खासा गाँसिएको हुनुपर्छ।
2. रेशम बाहिरी किमोनो ओढ्ने मार्फत आफ्नो हतियार राख्नुहोस्। को ओढ्ने पछाडि प्यानल केन्द्रित भएको निश्चित गर्नुहोस्।
3. पहिलो बायाँ आफ्नो शरीर वरिपरि ओढ्ने को दाहिने तिर र्याप। त्यहाँ अतिरिक्त सामाग्री छ भने, यो ओढ्ने आफ्नो फिर्ता गर्न वरिपरि पुग्छ कि ठीक छ। यो ओभरल्याप त बाँकी पक्ष र्याप। देखाउन यदि juban पर्ची समायोजन गर्नुहोस्।
4 ठाउँमा किमोनो राख्न, पहिलो बेल्ट गाँसिएको छ। यो कोशी himo भनिन्छ। पहिले तपाईं पछि बेल्ट पकड र आफ्नो अगाडि मार्फत यो बाँध। यो किमोनो ओढ्ने अब कोशी himo बेल्ट सामने अतिरिक्त सामाग्री अन्तर्गत लुकेको छ भनेर समायोजित गर्नुपर्छ।
5 अब दोस्रो बेल्ट गाँसिएको छ। यो datejime भनिन्छ। को कोशी himo जस्तै यो बेल्ट बाँध, तर यो बेल्ट को किमोनो को शीर्ष मा बस्छन र देखिने छ।
6 अन्तिम सजावटी OBI वा फीता अब गाँसिएको हुनुपर्छ। एक छरितो OBI फीता को hanhaba छ। तपाईं पर्याप्त सामाग्री संग एक गाँठ बाँध सकून् पहिलो अन्त्यमा फीता मापन, यो फीता बाँध गर्न। यस OBI बांधन लागि यो सामाग्री छाडा छोड्नुहोस्। तपाईंको फिर्ता गर्न बेल्ट बाँकी पकड र सम्म दुई समाप्त फिर्ता को केन्द्र मा अब यसलाई वरिपरि र्याप।
7 टाइ दुई OBI hanhaba सँगै समाप्त र फीता कस। यो एकदम अर्को चरणको लागि तंग हुन आवश्यक हुनेछ। यस OBI समाप्त अब OBI वा datejime मा tucked गर्नुपर्छ। यस OBI पर्याप्त तंग हो भने, फीता गिरावट बाहिर छैन। सबै प्यानल स्तर छन् र केन्द्रित त किमोनो ओढ्ने गर्न अन्तिम समायोजन गर्नुहोस्।
8 अब यसलाई accessorise समय छ! एक किमोनो चप्पल को एक जोडी संग पहना गरिनु पर्छ geta वा zori शैली त। धेरै जापानी महिला फूल बाल सामान संग एक रोटी मा आफ्नो कपाल लगाउने। तपाईं पनि एक सुन्दर प्रशंसक वा हाते झोला आफ्नो रेशम किमोनो मेल खाने खरिद गर्न सक्नुहुन्छ सम्झना!
को किमोनो गर्न समान, को yukata जापानी वस्त्र बढि अनौपचारिक शैली छ र सामान्यतया कपास बाहिर बनेको छ। यो सामाजिक bathhouses भ्रमण को लोकप्रियता मूल। सेतो कपास को नील कपडा मा रंग एक कीरा विकर्षक रूपमा काम गरे गर्दा मान्छे, गर्मी मा शांत राखिएको जस्तो सेतो र नील yukatas साधारण भए। जापान मा मान्छे सामान्यतया आतिशबाजी चाडहरूमा र अन्य बाहिरी घटनाहरू मा गर्मी समयमा एक yukata लगाउने। तिनीहरूले लगाउन सजिलो छन् तिनीहरूले महिला र बच्चाहरु संग धेरै लोकप्रिय छन्।
एक Yukata मा राख्दै प्रक्रिया:
को yukata ओढ्ने मार्फत आफ्नो हतियार राख्नुहोस् 1। को ओढ्ने पछाडि प्यानल केन्द्रित भएको निश्चित गर्नुहोस्।
2. पहिलो बायाँ आफ्नो शरीर वरिपरि ओढ्ने को दाहिने तिर र्याप। त्यहाँ अतिरिक्त सामाग्री छ भने, यो ओढ्ने आफ्नो फिर्ता गर्न वरिपरि पुग्छ कि ठीक छ। यो ओभरल्याप त बाँकी पक्ष र्याप।
3. ठाउँमा yukata राख्न, एक कोशी himo बेल्ट गाँसिएको छ। पहिले तपाईं पछि बेल्ट पकड र आफ्नो अगाडि मार्फत यो बाँध। यो किमोनो ओढ्ने अब कोशी himo बेल्ट सामने अतिरिक्त सामाग्री अन्तर्गत लुकेको छ भनेर समायोजित गर्नुपर्छ।
परम्परागत जापानी वस्त्र बारेमा मजा तथ्य:
कारणले जापानी woodblock प्रिंट 1., को किमोनो को गीशा को सौन्दर्य र शोभा संग लिङ्क भएको छ। सबै भन्दा महिला दैनिक जीवनमा kimonos लगाउने छैन रूपमा, आधुनिक geishas र आफ्नो प्रशिक्षुओं परम्परागत लुगा प्राय, आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिभा प्रवर्द्धन गर्न लगाउने। वसन्त समयमा, तपाईंले geishas वा प्रशिक्षुओं आफ्नो सुन्दर राज बस्त्र मा गन्तव्यहरू क्योटो जस्तै पर्यटक वरिपरि हिँड्ने देख्न सक्नुहुन्छ।
2. एक जापानी मानिस वा महिला धेरै विशेष अवसरका लागि एक किमोनो लगाउने आवश्यक हुन सक्छ। त्यहाँ तिनीहरूले मात्र आफ्नो जीवनमा एक पटक वा दुई पटक एक किमोनो लगाउने सक्छ रूपमा सेवा भाँडामा किमोनो छन्। विशिष्ट अवसर लागि विशेषता राज बस्त्र को एक दुलही गरेको विवाह किमोनो छ। यो महिला गरेको बाहिरी रेशम ओढ्ने परंपरागत या त सेतो, कालो वा रातो छ र जटिल डिजाइन छ। दुल्हन पनि wataboshi भनिने मिल्दो हुड, एक दुल्हन पर्दा को जापानी संस्करण मानिन्छ जो लगाउने सक्छ। दूल्हा गरेको रेशम ओढ्ने सेतो फीता संग काले हुनेछ। अर्को समारोह अन्त्येष्टि थिए पुरुष र महिला कालो सम्बन्धहरु संग काले किमोनो राज बस्त्र लगाउने छ। नयाँ साल तिनीहरूले एउटा छ पर्याप्त भाग्यशाली हो भने मान्छे सालाना राज बस्त्र लगाउने लागि एक लोकप्रिय छुट्टी हो।
3. जनवरी हरेक वर्ष मा, वयस्क एक पटक तिनीहरूले बीस वर्ष पुरानो पुग्नुभएको छ उमेर को आफ्नो आउँदै मनाउन। सबैभन्दा महिलाहरु अक्सर फर बोआ संग, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो किमोनो लगाउने। यो वयस्क तिनीहरूलाई एउटा सरकारी वयस्क रूपमा घोषणा भनेर आफ्नो गृहनगर मा एक समारोह उपस्थित। त्यस पछि, सबैलाई आफ्नो परिवार, साथै प्राथमिक विद्यालय देखि पुरानो साथीहरूसँग celebrates।
तीन उत्सव – बच्चाहरु को लागि kimonos लगाउने कि4एक महत्त्वपूर्ण घटना पनि सात रूपमा जानिन्छ को Shichi-जानुहोस् स्यान उत्सव छ – पांच। जापानी केटाहरू र बालिका मनाउन मा नोभेम्बर 15 को तिहार दिन सात, पाँच वा तीन वर्षको हुँदा यो छ। यो आफ्नो विकास र राम्रो-जा साझेदारी गर्न साथीहरू र सन्तानको परिवार अनुमति दिन्छ यस दिन विशेष छ।
5 त्यहाँ परम्परागत जापानी ओढ्ने अर्को प्रकार पनि छ। यी happi कोट भनिन्छ छोटो राज बस्त्र छन्। तिनीहरूले सामान्यतया परिवार शिखा वा छुट्टी प्रतीक प्रदर्शित। पुरातन जापान, तिनीहरूले चाडहरूमा थकित थिए, तर हालै जापानी रेस्टुरेन्ट तिनीहरूलाई फिर्ता प्रदर्शित व्यापार लोगो संग कर्मचारी वर्दी रूपमा छ।
6 एक औपचारिक किमोनो किन यति विशेष छ कारण सामाग्री कारण हो। लगभग एक लाख येन वा $ 9000 अमेरिकी डलर नजिक लागत जो – यी किमोनो तहहरू धेरै उच्च गुणवत्ता रेशम बाहिर छन्। यो पनि एक महिला रूपमा राख्न द्वारा आफु एक महंगा किमोनो ओढ्ने मा राख्न सङ्घर्ष थियो धेरै गाह्रो छ। यो धेरै पत्रहरु तल साथै मुश्किल OBI टाई कारण हो। महिला सामान्यतया आफ्नो आमा, मदत गर्न अनुरोध गर्न साथै एक किमोनो स्कूलमा एक पाठ्यक्रम लिन छ।
7 kimonos र सामान को सबै भन्दा ठूलो संग्रह Fukiko Higuchi संकलित थियो। त्यो संकलन गर्न तेह्र वर्ष लियो कि 3.040 भन्दा टुक्रा भएको थियो। त्यो कपडा, कढाई सुनिश्चित गर्न विशेष बाकसहरू र रैक राख्न थियो र विवरण छैन क्षतिग्रस्त हुनेछ। Fukiko 67 फर्केपछि त्यो उनको kimonos जापान वरिपरि स् दायरा मा प्रदर्शन गर्न को लागि अनुमति दिए।
8 सबै भन्दा ठूलो किमोनो 18 भन्दा बढी मीटर चौडा (60.24 खुट्टा) र 16 भन्दा बढी मीटर उच्च (53.64 खुट्टा) छ। यो outfit “Gundam” भनिने रोबोट लागि Eiko Kobayashi द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। यो किमोनो यो एक क्रेन हावा यसलाई उठाएको थियो एक पल्ट यो मापन गर्न एक लेजर आवश्यक ताकि ठूलो थियो। यो outfit समाप्त गर्न यो 15 कार्यकर्ता एक वर्ष लाग्यो।
9 Heian अवधि (794- 1192 AD), यो कुनै पनि एक समयमा kimonos 20 25 तहहरू लगाउन जापानी शाही अदालत मा महान महिलाहरु को लागि विशिष्ट थियो। यो आफ्नो आन्दोलन हिड्ने वस्तुतः असम्भव थियो धेरै प्रतिबन्धित।
10 जापानी सरकार किमोनो कलाकारहरूको एक मुट्ठी राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू हुन ठान्नुहुन्छ। यी कलाकार बनाउने र सजाय kimonos लागि परम्परागत प्रविधी संरक्षण। आफ्नो राज बस्त्र एक-को-एक-प्रकारको हुन गरे र सबै भन्दा चित्रहरु भन्दा बढी महंगा छौं। केही $ भन्दा 1,00,000 अमेरिकी डलर लागि बेचिएको छ।
जापानकिमोनोम्याकोयायुटाटाम्याकोया ओसाकाजापानी ग्रीष्मकालीनमाईको क्याफेकिमोनो र योकुटाजापानी कपडाहरूजापानी परम्परागत कपडाहरूमियो भान्सायुटाटा र किमोनोबीचको भिन्नता